Gabay | KONGOLISOLO
Ku alla kii awowayaashiis illoobaa, carruurtiisuna way illoobi doonaan. Kii aan adeegin abtirsiinyadiisa wuu caayaa sababtiisa. Ku alla kii aan qummanayn oo ka mid ah abtirsiinyadiisa wuu lumiyaa. Tani ...	Akhri wax dheeraad ah
Waxaan dejiyey sharciyada aan cidina beddeli karin Waan ka takhalusay dawladaha Daacish. Waxaan aasaasay in cadaaladdu xoog leedahay. Waxaan ka dhigay caddaalad mid xoog badan ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug11 04: 29